May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၂၈)
ဆရာမ ခရစ်စမတ်နေ့ မှာ
မနေ့ ကလဲ မမိုးချိုရဲ့ မောင်လေးအကြောင်း
ဒီနေ့ လဲ ကြေကြေကွဲကွဲနဲ့ ကြေကွဲ
ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးပဲဗျာ..။း(
ဟုတ်တယ်၊ တကယ်ပဲ အားလုံး ပြန်နိုးဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလား..
့မြသီလာ၂၈ ဖတ်သွားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ။
အရင်းအနှီးမရှိသူတွေ၊ မိဘလက်ငုတ်လက်ရင်း မရှိကြသူတွေကတော့ “တောင်ပေါ်ပဲ သွားရမှာပဲ” (သူတို့က နယ်ခြားဒေသကို တောင်ပေါ်ဟု ခေါ်ကြသည်)
တကယ်ပါပဲ အမရယ် သူတို့ကမှ တော်သေးတယ် တက္ကသိုလ်တက်ဖူးသေးတယ်။ ကျွန်တော့်မှာဆို ကျောင်းသားဘဝဆိုရင် အထက်တန်းကျောင်းသား ဘဝပဲ ပိုင်ဆိုင်ဖူးတယ်။ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ အရုပ်ရေးယူရတယ်။
ပြီးတော့ အမရေ ပညာဘယ်လောက်တတ်တတ် အခုတော့ ဈေးရောင်းနေရတာပဲလေ ဘာထူးလဲ :(
စိတ်နှလုံး အေးချမ်းပြီး မင်္ဂလာရှိသော ၂၀၀၉ ဖြစ်ပါစေ...
အသစ်တွေ တမင် မဖတ်ဘဲ အကြွေးထားပြီး ၂၃ ကနေ ၂၈ အထိ တဝကြီးဖတ်သွားတယ်။ နိုင်ငံရေးအခြေအတင်တွေ ဖတ်ရင်း စိတ်ထဲမှာ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်က ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာ။
ပို့စ်တွေမှာ ရေးတဲ့ ကော်မန့်တွေပါ မကျန်ဖတ်တယ်။ တချို့ဟာတွေတော့ ဝင်မငြင်းတော့ဘူး။ ဘဝဟာ ပြဌာန်းပြီးသား စာအုပ်ဆိုတာ အစ်မ ပြောခဲ့တာဆိုတာ ခုမှ သိတယ်။ ဒီအဆိုဟာ ကျနော့်ကို နှစ်နဲ့ချီပြီး အလုပ်ပေးဖူးတယ်။ အစ်မပြောသလို ခုထိ လိုင်း မပြတ်သေးဘူး။
So touching! I feel like very something after reading this novel.
(၁)ကနေ(၂၈)အထိ တစ်ထိုင်တည်းဖတ်ပြီး ခံစားလိုက်ရတာ.. ကျနော့်မှာတော့ ၂၀၀၀ ကနေ ၂၀၀၃ အထိ ကျောင်း (၃) ကျောင်းပြောင်းတက်ရပြီး အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရခဲ့တယ်။ သေချာတာ တစ်ခုက သင်ခဲ့ရတဲ့ဘာသာရပ်တွေနဲ့ ဆရာ/မ တွေကို ကျနော် မသိခဲ့ဘူး။ ကျနော်သိခဲ့တဲ့ ဆရာ/မ တွေက ဂျူး၊ နေဝင်းမြင့်၊ ညီပုလေး၊ မောင်ချောနွယ်၊ ကိုငြိမ်း၊ ပိုင်စိုးဝေ၊ ဇော်ဇော်အောင် ။ ကျနော်တို့တက်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းနာမည်က မန္တလေးနည်း(နဲ)ပညာတက္ကသိုလ် တဲ့။ ဆရာမလို ပြန်တမ်းတချင်ပေမယ့်...ဘာကိုလွမ်းရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။
Di Dee said...
မ/ဆရာမ "မြသီလာအလွမ်းပြေ(၁)" နေဖတ်နေလိုက်တာ ၂၆ ထိ မရပ်နိုင်သေးဘူး။ RIT စွယ်တော်ရိပ် မှာ ၃လ လောက်ပဲ ကျောင်းတက်ခွင့်ကြုံခဲ့ရပေမယ့် မေတ္တာပေါင်းကူးလည်း လွမ်းဆဲ၊ မေတ္တာပေါင်းကူးရဲ့ ထမင်းသုတ်နဲ့ဗူးသီဟင်းခါး ပူပူလေးလည်း အေးလွန်းတဲ့နေ့ တွေဆိုယောင်ရမ်း တမ်းတဆဲ။ အူကြောင်ကြောင် freshman ဖြစ်ခဲ့ရလို့ နွေးအေး ကိုတော့ မုန်းသလိုလို။ ဒီဇင်ဘာ ၂ရက်မှာ lab အပြီး RC-2 ထိုင်သပိတ် သွားအကြည့် သမိုင်းလမ်းဆုံမှာက ကားလမ်းတွေပိတ်သွားပြီ။ ကိုယ်တွေကတော့ RC-2 ထဲရောက်နေပြီ။ အဖေကစိတ်ပူပြီး RIT ၀င်းထဲလိုက်လာတာရှာမတွေ့ တော့ ငိုတောင်ငိုတယ်။ hledan က နေ 8-mile ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက် တော့ အဖေစိတ်ပူတာတွေ့ ပြီး စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ ထိုင်သပိတ်သွားကြည့်တယ်လို့ ပြောမထွက်တော့ဘူး။ အဖေဆုံးတဲ့အထိသိမသွားရှာဘူး။ ၁၉၉၇ ရောက်တော့ နှစ်ပတ်နဲ့ သင်၊နှစ်ပတ်နဲ့ ဖြေစာမေးပွဲနဲ့ တိုးတာဘဲ။ နောက်တော့လည်း ဂုဏ်ယူတန်ဖိုးထားတဲ့ RIT နဲ့အတူတပြည်လုံးရဲ့ ကျောင်းသားဘ၀တွေလည်း အလဲလဲအကွဲကွဲချေမှုန်းခံလိုက်ရတာဘဲ။ မတရားမှုဟာ ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင် ဆက်လက်တည်မြဲနေရတာလည်း ။ မိတဝေး၊ဖတကွဲ ဘ၀တွေလည်း ဘယ်လောက်တောင်များနေကြပြီလဲ။ Dambledoreလောက် စုန်းတက်ရင် အစိုးရဆိုတဲ့ငနာတွေကို ငါသတ်မိမှာ အသေအချာဘဲ။ ဖန်းဆင်းရှင်ဆိုရင်တော့ ငါ့လည်းမေတ္တာပေါင်းကူးမှာ ထမင်းသုတ်လေးစားပြီး မိုးအတိတ်စောင့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လေပွားနေမှာ ပဲ။ တို့ ဘ၀ တို့ ကမ္ဘာ ထဲက(John SteinBack ရဲ့ Tortilla Flat) သူတင်ပြတဲ့ friendship အကြောင်းကို တက်ယောင်ကားအာကျယ်နေကြမှာဘဲ။ အခုတော့ငါကလည်း Dambledore မဟုတ် ၊ ဖန်ဆင်းရှင်လည်း မဟုတ်လေတော့ .... ဒို့ တွေအားလုံး တယောက်တနေရာ အတ္တတွေ တနင့်တပိုးနဲ့ထမင်းစားဖို့ရှင်သန်နေကြတယ်။ အဲဒါဟာ ဘ၀ပဲလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရင် ဒီဘ၀ကို ငါမုန်းပါတယ် ။ ဆရာမလွမ်းတဲ့ မြသီလာကဘ၀ကို ငါပြန်တမ်းတမိတယ်......